Layma's World: December 2007
အမှတ်တရ ... ဒီ ... ၃၁ …
၃၁ … ဒီဇင်ဘာ … အဝေးကဖုန်းမြည်သံရယ်…. တစ်နှစ်ကူးချိန် အိပ်မက်မက်တယ်…..
ဒီသီချင်းလေးက ဒီအခန်းထဲမှာ ပျံ့လွှင့်နေတာ ၁ လလောက်ရှိသွားပြီ …။
ခပ်တိုးတိုးလေး လိုက်ဆိုနေတဲ့ ၂၂ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာကို သေချာကြည့်ရင် ပြုံးနေတာကို တွေ့ ရလိမ့်မည် ..။
ပြုံးတာမှ မျက်လုံးလေးတွေပါ ပြုံးနေကြတာ …။ အရည်လေးတွေတောင် တဖျတ်ဖျတ်လက်လို့…။
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရောက်ရင် … အဖြေပေးပါနော် …တဲ့ …။
ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ … အဖြေပေးရတော့မယ် … ။
ပေးစရာ အဖြေက အဆင်သင့် .. ဒါပေမယ့် ..ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပေးရမှန်းမသိ …။
အဲဒီနေ့က သူငယ်ချင်းနဲ့ တနေရာကို လိုက်သွားမိတယ်…။
၃၁ ည …. မောဟိုက်နွမ်းလျစွာနဲ့ ဖုန်းမြည်သံလေးကို စောင့်စားနေခဲ့တယ်….။
“ ကို ညနေအလုပ်ပေါ်လာလို့ မလာနိုင်တော့ဘူး .. ညကျမှ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်”…တဲ့…။
တကယ့်ကို တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ .. အရေးကြီးကိစ္စ ပေါ်လာလို့ပါ …
ဒီနေ့ အဖြေပေးမယ်လို့ ပြောထားတယ်နော်… ပေးလေ…
ဟာ…..စိတ်ကောက်သွားတာလား…..အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့ … ဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေ စတိတ်ရှိုး ခေါ်တာတောင် မလိုက်ဘူး…
မကောက်ပါဘူး….စဉ်းစားဦးမယ် … နောက်နှစ်မှ ပေးမယ်…
မဆက်နဲ့ … အားလုံးအိပ်ကုန်ပြီ … ဒီနေ့မပေးဘူးဆိုမပေးဘူးပဲ… ဒါပဲ….။
ဖုန်းချပြီး အိပ်ရာပေါ်ကို လဲချလိုက်တဲ့အခါ လူက တော်တော် နုန်းနေပြီ …။
အိပ်မက်တွေပြိုလဲ … ယဉ်ထားတဲ့ စိတ်ကူးတွေ ကျိုးပဲ့သွားစေတဲ့ တရားခံက ဘယ်သူလဲ လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေပြန်တယ် …။
မနက်က သူငယ်ချင်းနဲ့ ဗေဒင်သွားမေးခဲ့တာကိုး…။
ဒီနှစ်ထဲမှာ အိမ်ထောင်ရေးစဉ်းစားရင် ကံဆိုးလိမ့်မယ် … မွေးနေ့ကျော်ပြီးမှ ကောင်းမယ်….။
မရဘူး ..နောက်နှစ်မှ ပေးလိုက်ပါ ….။
သေရော … ကောင်းရော ..။
လက်ထပ်မည့်သူကိုပဲ ချစ်သူအဖြစ်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး အတွက် ချစ်အဖြေဟာ လက်ထပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ အဖြေနဲ့ အတူတူပဲမို့ တစ်ဘ၀လုံးစာ ကံမဆိုးဖို့အတွက် ခဏတာ အချိန်လေးနဲ့ လဲလှယ်ရပေမပေါ့လေ…။
ဒီလိုနဲ့ .. ဒီလိုနဲ့ … ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ညလေးမှာ အိပ်မက်ထဲမှာ ချစ်သူနဲ့ တွေ့ ဖို့အတွက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ အိပ်ဆေး တစ်ခြမ်းသောက်ပြီး အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။
အဲဒီကောင်မလေး ဘယ်သူလဲဆိုတော့ …. ပြောပြဘူး…. သတ်ချင်သတ်….။ ။
ကိုရန်အောင် က tag လို့ ဆော့ဖြစ်တဲ့ အမှတ်တရ ၃၁ ဆိုတဲ့ Tag Game မှာ လေးမက ပါဝင်ရေးသားစေချင် သူတွေကတော့ ကိုသန့် ၊ မောင်မျိုး ၊ ဂျယ်ရီ ၊ မနုစံ ၊ သိုးမလေး နဲ့ သဇင်ဏီ တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်..။
Posted by lay-ma at 1:08 AM 18 comments Links to this post
Labels: Link to the past, personal, Seasonal Post, Tag
သူတို့လို ပျော်မိသည် ...
စစ်ကြီးပြီးဆုံး၍ ... အဲ ... ဟုတ်ပေါင်... အဲ..အဲဒါကြီး ပြီးဆုံး၍ ... လေးမ တစ်ယောက် iblogger.org သို့ အရောက်တွင် .... လေးမ blog စလုပ်တုန်းက မိတ်ဆွေဟောင်း တော်တော်များများ လိုက်မလာနိုင်ခဲ့ပါ…။
နောက်ဆုံးရောက်လာသူကား လေးမ၏ မိတ်ဆွေကြီး ဂုတ်တို အဲ .. ယောင်လို့ … ဂျယ်ရီ ပင်ဖြစ်ရာ .... ဘယ်အရပ်က ပေါ်လာသည်မသိ ... မနေ့က စာကြွေးတွေ တပုံကြီးဖတ် ... comment တွေ တပျော်ကြီး ပေးသွားသဖြင့် ... လေးမမှာ ၀မ်းသာ၍ မဆုံးတော့…။ ။
လေးမ၏ အရည်မရ အဖတ်မရ ... ချောက်တီးချောက်ချက် ... စာမျိုးစုံကို .... ပုံမှန် (သို့) တခါတရံ လာရောက် ၀ါးမျို မှတ်ချက်ပေးသွားကြသော
.... မောင်မျိုး၊ ကိုစာကလေး ၊ ကိုသန့်ဇော်မင်း ၊ ကိုမျှားပြာ ၊ ကိုညိမ်းညို ၊ ကိုလွမ်းစေ ၊ ကိုဂျယ်ရီ ၊ ကိုဒီဝိုင်း ၊ ကိုအတာ ၊ ကိုဇီးကွက်၊ ကိုတော်ကီ ၊ ကိုမျက်လုံး ၊ ဘလင့် ၊ ကိုနိုင် ၊ ကိုသုပုန် ၊ကိုပီကေ ၊ ကိုဘုရင့်နောင်၊ ကိုပုဂံသား၊ ကိုကောင်းကင်ကို ၊ ကိုစိုးထက် ၊ ကိုဂျူလိုင်အိပ်မက် ၊ ကိုရန်အောင်၊ ကိုသင့်ကား၊ ကိုတက်စလာ ၊ ဂျေ ၊ မဂျစ်တူး၊၊ မနုစံ ၊ မမြရွက်ဝေ ၊ မချစ်လေပြေ ၊ သိုးမလေး၊ နှင်းဆီနီနီ ၊ ၀င်္ကပါ ၊ သဇင်ဏီ ၊ မသမုဒယ ၊ မအိမ့်ချမ်းမြေ့ ၊ ညို ၊ ခေးရော့စ် ၊ မအိသူ ၊ မိုးချစ်သူ ၊မမယ်လိုဒီမောင်၊ မတူးတူး ၊ မေပျို ၊သဉ္ဇာ ၊ မညလေး ၊ မပန်ဒိုရာ နှင့်
“နှစ်သစ်ကူး ရွှင်မြူးကြပါစေကြောင်း ၊ ဂေါ်မစွံ လူပျိုကြီးများလည်း ဂေါ် ၍ စွံကြပါစေကြောင်း ၊ show room ထဲမှ မမလှလှလေးများ၊ ညီမလေးများလည်း ... စိတ်ချမ်းမြေ့ကြပါစေကြောင်း ”
Posted by lay-ma at 1:17 AM 17 comments Links to this post
Labels: Cartoons, personal, Tag, That's what I wanna say, Wondering
စိတ်..စွပ်.. ( ၃)
တစ်ခုသော ညမှာ … တစ်ရေးနိုးလာတဲ့ Nasreddin သည် … သူ့ခြံထဲမှာ အိမ်ဘက်ကို ရွေ့လာနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ ဖြူဖြူအရာတစ်ခုကို … မြင်လိုက်ပါတယ်…။
အဲဒါ သူခိုးပဲ ဖြစ်ရမယ် လို့ … တွေးလိုက်မိတဲ့ Nasreddin က ထိုအရာကို သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်ပါတယ်…။
မှောင်ကြီး မဲကြီးထဲမှာ အိမ်ပြင်ထွက်ရမှာ သိပ်ကြောက်တဲ့ Nasreddin ဟာ အိပ်ရာထဲ ပြန်ဝင် အိပ်နေလိုက်ပါတယ်…။
နောက်တစ်နေ့မနက် ခြံထဲကို ဆင်းတဲ့အခါ အ၀တ်တန်းမှာ သူ့အကျီင်္ဖြူ တစ်ထည် လှမ်းထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်…။ အရင်ရက်က သူ့ဇနီးက လျှော်ပြီးလှမ်းထားတာပါ..။ အခုတော့ အဲဒီ အကျီင်္င်္ရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာ ကျည်ဆန်ဖောက်သွားတဲ့ အပေါက်တစ်ပေါက် ရှိနေပါတယ်..။ “ ဘုရား..ဘုရား.. မနေ့ညက … ငါ … ကံကောင်းလို့ပါလား..။ မနေ့ညကသာ ဒီအကျီင်္
၀တ်ခဲ့မိရင် ငါ့ကိုယ်ငါ ပစ်မိတော့မှာ ….။”
၀န်ခံချက် ။ ။ အမည်နှင့် ရေးသူမသိသော Intermediate story တစ်ပုဒ်ကို လေးမ နားလည်သလို ဘာသာပြန်သည်…။
တစ်ခါတစ်လေမှာ သူ့လို တွေးမိကြဖူးလား…။ လေးမတော့ … တစ်ခါတစ်လေတောင် မဟုတ်ဘူး … မကြာခဏပဲ သူ့လို တွေးပြီး အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေတတ်တယ်…။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ ပြုလုပ်သူ … ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း …. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ တရားခံ …. ဆိုတာကို မကြာခဏ မေ့လျော့ သွားတတ်တယ်…။ ။
Posted by lay-ma at 1:32 AM7comments Links to this post
ကောင်လေးရေ … ပူအိုက်တဲ့နွေညတွေမှာ လေညင်းခံရင်း ခင်နှင်းဆီနဲ့ …. ခင်နှင်းဆီရဲ့ အတိတ်ကို လွမ်းသတဲ့လား….။
ခင်နှင်းဆီကတော့ ကောင်လေးကို နှင်းတွေဝေလည်း သတိရတယ် … သစ်ရွက်ကြွေလည်း အမှတ်ရတယ်… မိုးစက်တွေကြားထဲမှာလည်း သတိတရ ရှိနေပါတယ်… ။
ဒီလိုပြောလို့ ကောင်လေးကို လွမ်းနေတာ ... တမ်းတနေတာလို့တော့ မထင်နဲ့နော်…။ ကောင်လေးနဲ့ ခင်နှင်းဆီရဲ့ အတိတ်ရက်စွဲလေးတွေကို မေ့မရနိုင်သေးတာပါ … ။
ခင်နှင်းဆီဟာ တစ်ချိန်က ကောင်လေးရဲ့ အသည်းနှလုံး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ရိပ်စားမိယုံကလွဲလို့ တရားဝင် သိခွင့်မရခဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါကွယ်…။
ဣနြေ္ဒဆင်မှ ယဉ်ရတဲ့ မိန်းမသားဘ၀မှာ ခင်နှင်းဆီရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ကောင်လေးကို ပေးအပ်ဖို့ ၀န်မလေးခဲ့ဘူးဆိုတာ ဖွင့်ပြဖို့လဲ အခွင့်မသာ…ခဲ့ဘူး…။
ရေလာဖို့ မြောင်းဖောက်ပေးတဲ့ အတတ်ပညာကိုလည်း စာသင်ခန်းက သင်မပေးလိုက်ဘူးလေ…။
သူနဲ့လည်း ကျောင်းနေစဉ် သူစုထားတဲ့ မုန့်ဖိုးလေးနဲ့ ၀ယ်ကျွေးတဲ့ အရသာကို မမေ့ပြီ…
ကောင်လေးက ခင်နှင်းဆီ ၀ယ်ကျွေးခဲ့တဲ့ မြီးရှည်အရသာလေးကို မမေ့ဘူးဆိုရင် အဲဒီဆိုင်မှာ သွားစားလို့ ရပါတယ်ကွယ်…။
ကောင်လေးနဲ့ အတူစားခဲ့ရတဲ့ အရသာကို မမေ့နိုင်တဲ့ ခင်နှင်းဆီက ဘယ်လိုကုစားရမလဲ ပြောခဲ့ပါဦးလေ…။
ကျောင်းတုန်းက ခေတ်အစားဆုံးသီချင်းက မခင်နှင်းဆီ …။ အလှဆုံးမိန်းကလေးက မခင်နှင်းဆီ …..။
ဒါပေမယ့် ခင်နှင်းဆီ စေ့စပ်တဲ့ညက အိမ်ရှေ့မှာ မူးမူးနဲ့ ကောင်လေး လာအော်သွားတဲ့ သီချင်းက “ သားလေးမွေးရင် ကိုယ့်နာမည်ကိုပေးလိုက်ပါ ”..။
အဲဒီနေ့က အရှက်အရဆုံး မိန်းကလေးက ခင်နှင်းဆီ …။
တဖက်သတ်တိတ်တခိုးလေးနဲ့ ကြိတ်ပိုးဆွေးတဲ့ ကျွန်တော်ရယ်…
“ခင်နှင်းဆီကို ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျာ” ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းသက်သေ ... လူသက်သေ ဘာဆိုဘာမှ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ခင်နှင်းဆီ … မိဘစီမံရာနာခံခဲ့တဲ့အခါ တစ်ကျောင်းလုံးက မေးငေါ့ကြတယ် …။ ကြိတ်ဆွေးနေတဲ့ ကောင်လေးကို အသနားပိုကြတယ်…။
ကောင်လေးနဲ့ ခင်နှင်းဆီအကြောင်းကို ရာဇ၀င်တစ်ခုလို … ဇာတ်လမ်းဆင်ကြပြန်တယ်…။
အဲဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ အချစ်စာမျက်နှာကို ရေးချခွင့်မရခဲ့တဲ့ ခင်နှင်းဆီရဲ့ မျက်ရည်တွေ အကြောင်းတော့ မပါခဲ့ဘူး …။
အော်……ဟိုအစ်ကိုကြီး……ရဲ့ … မခင်နှင်းဆီ…
ခုချိန်မှတော့ ………. ထိုကောင်လေးက မဆွတ်ခဲ့လို့ မညွတ်ခဲ့ရတဲ့ …. ဟိုအစ်ကိုကြီးရဲ့ … မခင်နှင်းဆီ…ကို လွမ်းမနေပါနဲ့တော့ကွယ်…။
ပန်းကလေးလို လှနေတာပဲ ကြည့်နေချင်သည်
ပန်းလေးလို ညှိုးမှာကိုလည်း စိုးရိမ်မိသည်
မှတ်ချက်။ ။ မခင်နှင်းဆီ သီချင်း နားထောင်ရန် Real Player လိုပါသည် ။
Posted by lay-ma at 4:26 AM 10 comments Links to this post
Labels:2in 1 style, Heart touching songs
Online ပေါ်က ညီမလေး...
အမယ်…ကြည့်စမ်း… ဟိုတစ်ယောက်က ဘာရေးထားတာတုန်း…
FAQ ဆိုရင်တော့ Frequently Asked Questions လေ..။ အဲတော့ question မေးလို့ရပြီ..အားတယ်လို့ပြောတာလား…သူက ဂုရုကြီးလား…။
ဟား…ဟား..ဟား…အဖွားကြီး… ဒါကြောင့် မမကို ခေတ်မမီဘူးလို့ပြောတာ … ကျူလေ..ကျူ..ကျူတာ..သိပြီလား… ။ ကျူတာကို ရှင်းပြရဦးမှာလား … အီတာ…အီတယ်ဆိုတာက အီကြာကွေး…။
ငါသိပါတယ်ဟဲ့ … သူက ကျူကို Q နဲ့ရေးထားလို့ နည်းနည်းကြောင်သွားတာပါ…။ အောင်မယ်..အကောင်စုတ်က ကြီးကျယ်လို့ … သူ့ကိုများ ကျူရဦးမတဲ့ … မပြောနဲ့..သူ့ကို…။ ရှင်းထုတ်လိုက်…။
ပေါက်ပေါက်…နင်အွန်လိုင်းမှာ ရည်းစားထားဖို့တော့ မကြံစည်နေပါဘူးနော်…။
ဒါတော့ ဘယ်ပြောနိုင်မလဲ မမရဲ့…။ တချို့ကိစ္စတွေက ကြံစည်မထားလဲ ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေ…။
ဒီမယ်…မမ…။ ခေတ်ကပြောင်းသွားပြီ… အချိန်ကရှားသွားပြီ… မမတို့ခေတ်တုန်းကလို ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် စက်ဘီးလေးနဲ့ နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိဘူး…။
မနက် ၆ နာရီ ဖယ်ရီမှီအောင်ပြေးတက်လာတဲ့ စုတ်တိစုတ်ဖွားမိန်းကလေးကို ဖယ်ရီပေါ်ကကျောင်းသားချင်းက စိတ်မ၀င်စားဘူး …။
ကြပ်ညပ်နေတဲ့ ဖယ်ရီပေါ်မှာ အိပ်ငိုက်နေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းက ငွေလမင်း ဆိုတာရှားသွားပြီ…။ အဓိပတိလမ်းက စောင့်ပြီး ကံ့ကော်ပွင့်တွေ ဆက်သတဲ့ ခေတ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး…။ ကြိုက်တဲ့ပုံ ကို free e-card လေး ပို့ပြီး ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့ခေတ် … ။ အချိန်ကုန်သက်သာတယ်လေ …။
အင်း .. ဒါလဲဟုတ်တာပဲ
အပြင်မှာဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အာရိုက်ဖို့ နေရာ ဆိုတာ လိုတယ်…။ ဦးချစ်ဆိုင်မှာ ထိုင်ရင် …Boat club မှာ ထိုင်ရင် … ကန်တင်းမှာ ထိုင်ရင် ပိုက်ပိုက်ကုန်တယ်….။ ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့သူနဲ့ စကားပြောချင်ရင် …တွေ့ ချင်ရင် ဘော်ဒါတွေကို အကြံအဖန်လုပ်ခိုင်းရ..မုန့်ကျွေးရနဲ့ ..ရှုပ်တယ်… ပိုက်ပိုက်ကုန်တယ်….။ အွန်လိုင်းမှာက data တွေရှာရင်း software တွေ download လုပ်ရင်း အချိန်ကို အအားမထားဘဲ စကားတွေ အများကြီး ပြောလို့ရတယ် …။ ဒီခေတ်မှာ ဘာလုပ်လုပ် အမြတ်ထွက်အောင်လုပ်နိုင်မှ လူတော်..။
နောက်တစ်ချက်က ဂျီတော့သုံးတိုင်း မဟုတ်တာလုပ်တာမဟုတ်ဘူး…။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မိတ်ဆွေတွေရတယ်… အသိပညာတွေ ..အတွေ့ အကြုံတွေ ဖလှယ်လို့ရတယ်….။ ဖုန်းနဲ့ ခေါ်တာထက် အများကြီး သက်သာတယ်…။ တချိန်တည်း …တပြိုင်တည်း မိတ်ဆွေ သုံးလေးယောက်နဲ့ စကားပြောလို့ရတယ်…။
ဖူးစာပါလို့ဆုံသွားတော့ရောဘာဖြစ်လဲ … အလိမ်မခံရရင်ပြီးတာပဲ … ။ အွန်လိုင်းမှာတွေ့ …ဖူးစာဆုံပြီး… ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါင်းဖက်သွားတဲ့ စုံတွဲတွေ အများကြီးပဲ….။
အလိမ်ခံရပြီး ဒုက္ခရောက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်းရှိတယ်လေ…
ဒါကတော့ အသိတရားနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းရမှာပေါ့ …။ ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိတဲ့သူကတော့ အွန်လိုင်းမသုံးလည်း အလိမ်ခံရမှာပဲ….။
အင်းးးးး……ငါဘာလာလုပ်တာပါလိမ့်…မေ့တောင်မေ့သွားပြီ….။ အော်…နင့်အမေလေ…နင့်ကို စိတ်ပူလို့ အွန်လိုင်းမှာ ရည်းစားထားမှာစိုးလို့…. ငါ့ကို ညီအစ်မချင်း သတိပေးသင့်တာ သတိပေးပါဦးဆိုလို့ ဆရာလာလုပ်တာလေ….။
အင်း….ဘာပြောမှာလဲဆိုတော့ အင်း…….. online ပြဲဖစ်ဖြစ် ….offline ပဲဖြစ်ဖြစ် အသိတရား ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း ဆင်ခြင်တုံတရားတွေ ရှိပါစေဆိုတာပဲမှာတော့မယ်…. ။ အော်…. ဒါနဲ့ ပေါက်ပေါက် …မမကို သုံးသပ်ပြသလိုမျိုး နင့်အစ်ကို ကို သွားမပြောနဲ့နော် …။ ငါ့ကိုပိုးကြေးပန်းကြေးနဲ့ ကဒ်တွေ..အရုပ်တွေ..မုန့်တွေ ၀ယ်ပေးခဲ့ရတာ ပြန်တွေးပြီး နှမြောနေမှာ စိုးလို့ …။ ။
မှတ်ချက် ။ ။ မြှောက်ပေးခြင်း ၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း စိုးစဉ်းမျှမရှိ….မည်သည့် အသွင်မျှမဆောင်ပါ…။
Posted by lay-ma at 7:04 AM 17 comments Links to this post
Labels: Pieces, That's what I wanna say
ခရေ့ အတွေး…။ ။
နောက်ဆက်တွဲ။ ။ တချို့မိန်းမတွေက သနပ်ခါးပန်းနဲ့တူသလို တချို့ တွေကျတော့ ခရေပန်းလိုတွေးကြပြန်ရော…။
မှတ်ချက် ။ ။ ခရေကိုခူးလို့မရ..အပင်လှုပ်ပြီးခါချရ..မြေပေါ်ရောက်မှ ကောက်ယူရပါတယ်…။
Posted by lay-ma at 8:57 PM 11 comments Links to this post
Labels: Flower, Poem
My world & me (5)
Tag သမျှရေးသည် … ကြွေးကျန်မရှိ
သူများတွေက ကြွေးကျန်စာရင်းတွေ ထုတ်ပြန်နေတဲ့ အချိန်မှာ အကြွေးကင်းရှင်းသူဖြစ်ကြောင်း မင်္ဂလာဝင်ယူလိုက်ဦးမယ်…။ Tag game ကို မလေးက အထုပ်ဖြည်ပြရတာလို့ပြောတယ်… ကိုစိုးထက်က ရေးစရာမရှိရင် အသုံးဝင်တယ်လို့ပြောတယ်… တချို့က ဘလော့ဂ်ဂါ တွေရဲ့ ခင်မင်မှုလေးကိုပြတယ်လို့ မြင်တယ်….။ လေးမလည်း Tag game ကို သဘောကျတယ်…။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ် အားလုံးက ဖွင့်ဟ လို့ရသွားတာပေါ့ …။ Tag ခံရရင် ကျေနပ်တယ်….။ Tag ခံရရင် မနေနိုင်ဘူး…။ ချက်ချင်းရေးချင်တယ်…။ ရေးလက်စ တွေကို ပစ်ထားပြီးတော့ကိုရေးတာ….။
လေးမ ကလည်း ခင်တဲ့သူတွေကို Tag တယ်…။ လေးမ tag တာကိုရေးပေးတဲ့သူတွေကို tag တယ်…။ ရေးပေးမှလည်းကြိုက်တယ် … ။
အမှတ်တရ Tag ခရီးစဉ်
ဘလော့ဂ်ရပ်ဝန်းမှာ ပထမဆုံး tag ခံရတာ…။ ပုဂံသားက tag တာပါ …။ တကယ်ပြောတာပါ. ..။ သိပ်ပျော်သွားတာပဲ…။ ဘလော့ဂ်ရပ်ဝန်းထဲကို ရောက်ခါစ ဘလော့ဂ်ဂါအသစ်လေး တစ်ယောက်အနေနဲ့အံ့သြသွားပါတယ်…။ ငါ့ကို သူငယ်ချင်းလုပ်မယ့်သူ … လက်တွဲခေါ်တဲ့သူ ရှိပါလား ဆိုပြီးတော့လေ…။ ခုတော့ ပုဂံသားတစ်ယောက် ပျောက်ချက်သားကောင်းနေပြန်ပါပြီ…။
၂။ နောက်တစ်မိုး ( သို့ ) MTU မှာရွာတဲ့မိုး
ဘလော့ဂ်ဂုရုကြီး ကိုရန်အောင်က စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဟောင်းတစ်ဦးရဲ့ မိုးရွာခဲ့သောရက်စွဲများကို သိချင်ပါတယ်ဆိုပြီး tag ခံရတာပါ …။ ဘာပြောကောင်းမလဲ …ကိုရန်အောင်က tag တာဆိုတော့ ရေးပြီးသားကို ထပ်ရေးတာ….။
၃။ အကြိုက်ဆုံး အဟောင်း ၅
ကိုဘုရင့်နောင်က ရေးပြီးတဲ့ထဲက အကြိုက်ဆုံး ပို့စ် ၅ ခုရွေးခိုင်းတာပါ …။ လေးမ မသိတာမှန်သမျှ ရှင်းပြတတ်တဲ့ ကိုဘုရင့်နောင်လည်း ခုတော့ ပျောက်သွားလေပြီ….။
၄။ Blog ကဗျာ
Blog Day အမှတ်တရ အနေနဲ့မလေးလို့ခေါ်တဲ့ မ အိမ့်ချမ်းမြေ့ က တက်တာပါ …။ အမှတ်တရ နေ့လေးမှာပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ မလေးကို သိပ်ကျေးဇူးတင်တာပဲ…။
၅။ August လမှာ အကြိုက်ဆုံး
မလေးက အကြိုက်ဆုံး ၅ ပုဒ်ရွေးဖို့ tag တာပါ …။ ချစ်ရတဲ့ မမ က ရေးခိုင်းတော့လည်း ရေးပြီးသားပေမယ့် ထပ်ရေးပါတယ်…။
ဆောင်း မှာ မွေးတဲ့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ် လေးက ဆောင်းမှာမွေးတဲ့ လေးမ ကို ဆောင်း အကြောင်းရေးဖို့ tag တာပါ …။ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လေးလည်း မွေးနေ့ကျွေးရမှာကြောက်လို့ ထွက်ပြေးနေလေရဲ့…။
မခွန်မြလှိုင်က မွေးရပ်..နေရပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးရေးခိုင်းတာပါ…။
မမချစ်လေပြေက ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုတော့ ငယ်တုန်းက ပုံစံကို ရေးခိုင်းတယ်မှတ်ပြီးရေးလိုက်တာ…။ မမက တူတူပုန်းတယ်ဆိုတာတော့တွေ့ သား…. ဒါပေမယ့် ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားနည်းတွေရေးခိုင်းမှန်းမသိဘူး…။ မဂျစ်နဲ့မလေး ရေးထားတော့မှ ကစားနည်းမှန်းသိတယ်…။ မွှားသွားလို့ မမလေပြေရေ…အာဘွား…။
၉။ What's in layma's bag?
မဂျစ်တူးက အိတ်ထဲမှာပါတာတွေမေးထားတယ်…။ မဂျစ်ပို့စ်ဖတ်ပြီးတာနဲ့လွယ်နေကျ အိတ်ကြီးယူ…မှောက်ချ…. ဓါတ်ပုံရိုက်တော့ ကောင်းကင်ကြီးက ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့ …။ မဂျစ်ပို့စ်လေး ပြတော့ လေးမကိုရယ်တယ်…. ပေါက်ကရတွေတဲ့ …။
၁၀။ မိန်းကလေးဆောင်က အစ်ကိုကြီး
ကိုရန်အောင်က Halloween အမှတ်တရ အနေနဲ့သူရေးထားတာဖတ်တဲ့သူတိုင်းကို tag တယ်ဆိုလို့ ရေးပါတယ်…။
Chaos လေးက ရေးခိုင်းတာပါ..။ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ရေးတာပါ…။
၁၂။ အနှစ်သက်ဆုံး စာရေးဆရာများ
မိုးချစ်သူလေးက တက်ထားတယ်လို့ လာအော်တာနဲ့ချက်ချင်း သွားကြည့် …ချက်ချင်းရေး..ချက်ချင်းတင်လိုက်တဲ့ ပိုစ့်လေးပါ…။
၁၃။ အချစ်ဆုံးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ကိုဝေ ရေးခိုင်းတာ တော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရပါတယ်…( အချစ်ဆုံးက ဘယ်သူပါလိမ့် လို့ စဉ်းစားနေရတာ ) …။ နည်းနည်းကြာသွားတယ်…။
၁၄။ My world & me
ကိုပီကေ … က လူတိုင်းလိုလိုကို ရေးခိုင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ …။ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျသလို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လေးမ မရပ်မနား ရေးနေတဲ့ ပို့စ်လေးပါ…။
မောင်မျိုး က အိပ်မက် မက်ခိုင်းတာ …။ မက်ခိုင်းပြီး အခုသူက လေးမ အိမ်လာလည်လို့ မရဘူးဆိုပြီး ထွက်ပြေးနေတယ် …။
လေးမ မရေးဖြစ်ခဲ့တာ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်…။ အဲဒါကတော့ ဖတ်သူတိုင်းကို tag သည်ဆိုတဲ့ ကိုမိုးညိုရဲ့ “ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့သောက်ကျင့်မကောင်းခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် ” …….။
ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့ လေးမ တော်တော် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်းတာကို တွေ့ လိုက်ရပါတယ် …။ စိုသောလက်များ ခြောက်သွားကြလေပြီ လေ….။ လေးမကို ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့ tag ခဲ့ကြတဲ့ သူ တော်တော်များများ လေးမနားက တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ပျောက်သွားကြတယ်….။ အမြဲလာဖတ်တတ်တဲ့ ဘလော့ဂ်မရေးတဲ့ ဂျယ်ရီတောင် မလာတော့ဘူး….။ ကမ္ဘာကြီးကို ရွာကြီးတစ်ရွာ ဖြစ်စေတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ခြေရာတွေကို လိုက်ရှာဖို့ကျတော့ ခက်ခဲလိုက်တာ ….။ ။
Q : What kind of ship never sinks ?
A : Friendship ! Right ? ( ခုတလောဒီစာလေးပဲ မျက်စိထဲမြင်မြင်နေလို့ :( )
Posted by lay-ma at 8:51 PM 16 comments Links to this post
Labels: Tag, That's what I wanna say
လေးမ အိမ်ကို Ie နဲ့ ၀င်လို့မရဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်…။
လေးမIe browser အမြဲသုံးတာ ပါ…။
လေးမ တခြား ကွန်ပြူတာမှာ ဖွင့်ကြည့်တော့ error တက်လာပါတယ် …။ ဖွင့်လို့မရပါဘူး…။
Ie7ကို update လုပ်လိုက်ပြီး ၀င်ကြည့်တော့ ရသွားပါတယ်….။
Ie နဲ့သူများတွေ ကြည့်လို့မရဘဲ လေးမ က ဘာလို့ကြည့်လို့ ရနေတာလဲ…။
Firefox နဲ့ ကြည့်ရင်တော့ လူတိုင်း ( မောင်မျိုးကလွဲရင် ) ကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်…။
ကူညီနိုင်တဲ့သူ ရှိရင် ကယ်ကြပါဦး…။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ…။
ပြီးတော့ တစ်နေ့က အစ်ကို တစ်ယောက်က လေးမ ကွန်ပြူတာမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ် …သတ်လို့မရဘူး… ဆိုင်ပို့ရမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်…။ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့်လား…။ ဆိုင်လားတော့မသိဘူး…။ ရယ်စရာများဖြစ်နေလား…။ AVG ကလည်း update လုပ်လို့မရဘူး…။
Posted by lay-ma at 11:51 PM 8 comments Links to this post
ငါ့လှေမှာ error တက်ပြန်သတဲ့
Posted by lay-ma at 4:02 AM 16 comments Links to this post
ဒီအိပ်မက်ကို စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ရေးဖို့ Tag တဲ့ ဂေါ်မစွံ ၊ ဂီလာန ၊ အခွံကြောင်မျိုး ရဲ့ ခေါင်းကို ငရုတ်ကျည်ပွေ့ နဲ့ဆတ်ဆတ်ကလေး ထုချင်တယ်…။
မောင်မျိုး လေ… သူက စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ချင်သလောက်ယဉ်ပြီး အိပ်မက်ဆိုပြီး ရေးတယ်…။ ပြီးတော့ လေးမကို Tag တယ် …။
အိပ်မက်ဆိုတာက မေ့သွားတာက ခပ်များများ…။ ဘယ်က ဘာအကြောင်း ရေးရမှန်းတောင်မသိဘူး…။ သူ့လို စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးဖို့က ပိုတောင်ဆိုးသေး…။ သူ့လိုရေးကြည့်ပါလား… အိမ်ပေါ်က ခေါင်းနဲ့ ဆင်းနေရဦးမယ်…ဟတ်..ဟတ် ( မခံချိမခံသာ ရယ်သံ)…။ အိပ်မက်မက်ဖို့ သတိမရအောင် အိပ်ပျော်တတ်တဲ့ လေးမ မနေ့ညက အိပ်မက်မက်ပါတယ်…။ ကြောင်မျိုး ရေးခိုင်းတာ ဘာရေးရပါ့ … ဒီည အိပ်မက်တစ်ခုလောက်မက်ချင်တယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားရင်း အိပ်ပျော်သွားတာ…။
အိပ်မက်ထဲမှာလေ… ဂျစ်ကားတစ်စင်း ခြံထဲကို ၀င်လာတယ်… ။ အလဲ့ … ကောင်းကင်ကြီးမောင်းလာတာပေါ့ …။ ဘေးမှာ အ၀တ်အစား ချွေချွေတာတာ ၀တ်ထားတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်လည်းပါတယ်…။ လေးမ လားမသိဘူးလို့ သေချာကြည့်လိုက်တော့ လေးမလည်းမဟုတ်ပါလား….။
ဒေါသတကြီးနဲ့…. လေးမ မီးဖိုချောင်ထဲကို ခြေသံပြင်းပြင်း … ရှူးရှူးရှဲရှဲ နဲ့ဝင်သွားတယ်…( ဓါးသွားယူတာ……………မဟုတ်ဘူး…) ။ မီးဖိုထဲက မကွဲနိုင်တဲ့ အိုးတွေ ခွက်တွေ ရွေးပြီး နံရံကို ပစ်ပေါက် ပိတ်ကန် ပစ်လိုက်တယ်….။
ကောင်းကင်ကြီးက ကုတ်ကုတ် ကုတ်ကုတ်နဲ့မီးဖိုထဲ ၀င်လာတယ်….( လေးမကို ချော့မလို့ လို့ ထင်လိုက်တာ…. ပိုတောင် ဒေါသထွက်ပြလိုက်သေး…)…။
သူက ကြောင်အိမ်လှပ်ပြီး မြင်းခွာရွက်သုတ် ပန်းကန်လေးကိုင်ပြီး ပြန်ထွက်သွားတယ်….။ လေးမက အလိပ်လိုက်တက်လာတဲ့ ဒေါသတွေနင်ပြီး မျက်လုံးကြီးပြူးပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်….။
ဒါပဲ…အိပ်မက်က…ဒါပဲ….နိုးလာတော့ အိပ်မက်မှန်း သိပေမယ့် တော်တော်မကျေနပ်ဘူး…။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရတာ … အိပ်မက်ထဲမှာတောင် ရန်မဖြစ်တတ်လို့ … ဆွ့ံအနေလို့ …။ ။
လေးမ ကတော့ ညီမလေး ၀င်္ကပါရဲ့ အိပ်မက်လေးကို သိချင်ပါတယ်…။ ညီမလေးရေ…Tag ပြီနော်….လှလှလေးမက်နော်…။
Posted by lay-ma at 9:37 PM 11 comments Links to this post
Online ပေါ်က ဒေါ်လေး
တစ်နေ့က ဒေါ်လေး ဖုန်းဆက်တယ်…။
ကွန်ပြူတာ ကျောင်းသူမို့လို့ လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ သူ့ အဖေရုံးခန်းကနေ ခွဲပေးထားတာ…။
အဲဒါတစ်ချိန်လုံး သုံးနေတယ်…အဲဒီရှေ့က မထဘူး…။ပြီးတော့ အင်တာနက်ဆိုတာကြီးက နင့်ဦးလေး ပြောပုံအရဆို တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ … ။ အဲဒါနင့်ဦးလေးက နင်က ဘလောဂ့်တွေဘာတွေ ရေးတယ်ဆိုတော့ အင်တာနက်ကို တော်တော်ကျွမ်းကျင်မှာ…တဲ့…။ နင့်ညီမကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာက လွဲပြီး တခြားဆိုဒ်တွေ ကြည့်လို့မရအောင် အိမ်က ကွန်ပြူတာမှာ လာပိတ်ပေးထားပါတဲ့…။
အဲဒါမှ ဒွတ်ခနဲ့ လေးမ တွေ့တာပဲ…။ လေးမက ဘယ်သိပါ့မလဲ…။ ကိုယ်ကချည်း အပိတ်ခံနေရတာဆိုတော့ ကိုယ်က ဘယ်ပိတ်တတ်ပါ့မလဲ …။ သိရင်ပြောသွားကြဦးနော်…။
ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းရှာတဲ့ဆိုဒ်တွေလည်း ပိတ်ပေးသွားတဲ့…။
အော်..ဒေါ်လေးရယ်…အဲဒီဆိုဒ်တွေက အများကြီးဟာကို … လေးမ အကုန် ဘယ်သိပါ့မလဲ… ပြီးတော့ အဲဒီဆိုဒ်တွေက သိပ်အန္တရာယ်မရှိပါဘူး…။ လေးမတောင် account လုပ်ဖူးသေးတယ်…။
အိုအေ… ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်တွေပါ … တလောကပဲ ငါမိတ်ဆွေရဲ့ သမီး အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရည်းစားရပြီး လိုက်ပြေးသွားတာ အဲဒီအကောင်က အိမ်ထောင်နဲ့ ဖြစ်နေပါရောလား…. ။ အရွယ်ကောင်း …အတက်ကောင်းမှာ သူများ မယားငယ်ဖြစ်ရတာ မိဘတွေဆို ရင်ကျိုးရော…။
စိတ်မပူပါနဲ့ … ဒေါ်လေးရယ်… ညီမလေးလည်း ပညာတတ်တစ်ယောက်ပဲ … စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ပါတယ်…။
အဲဒီပညာတတ်မို့လို့ပဲ စိတ်ပူရတာလေ… ကျူပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီပညာတွေ မတတ်တော့ မိဘတွေ ဘာမှပူစရာမလိုဘူး….။ နယ်ကနေလာ…. အဆောင်မှာထားခဲ့…ပြီးတာပဲ ….။ ငါ့အမေဆို လေးတန်းအောင် …. ပိုတောင် ဘေးကင်းသေး…။ အခုသူတို့က ပညာတွေတတ်…ဥာဏ်တွေပွင့်ပြီး … ဇယားတွေကို ရှုပ်နေတာပဲ….။
စိတ်ထဲက “ ပညာတတ်တော့ ဥာဏ်တွေကောင်း…၊ သူမက ပြောင်းပါသည်…၊ ပျော်တတ်သော ကာလသားကြီးတွေ ကြိုက်ကြသည်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင်သီချင်းလေးတောင် ဆိုလိုက်မိသေး…။
ဟုတ်ကဲ့..ဟုတ်ကဲ့.. လေးမ ကြည့်လုပ်လိုက်ပါမယ်…။ ဒါပဲနော်…ဒေါ်လေး…။ ။
မှတ်ချက်။ ။ “Online ပေါ်က ညီမလေး…” ကို စိတ်ပါသောနေ့ ဆက်ရေးပါမည်…။ ဘယ်လိုမှတော့မထင်နဲ့ …။ ခုခေတ်…ခုတလော မိဘတွေရဲ့ သောက ကိုချပြတာပါရှင်…။
Ps . ငမျှားချိတ် ပြောတဲ့…. အရည်မရအဖတ်မရ ကချော်ကချွတ်စာရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါအဖြစ်က လွတ်လိုလွတ်ငြား အကျိုးပြု ပညာပေးစာ ရေးကြည့်တာ …။ :)
Posted by lay-ma at 11:05 PM9comments Links to this post
စေတန်ဂေါဒ့်ဆီက ဒါလေး ယူလာပြီး ဆော့နေတာ…။ ပျော်စရာလေး…။ ဆော့ကြည့်ပါလား…။
ဒါက လေးမ လက်ရှိပုံနဲ့အညိုဆိုးပြီး ညှပ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲလို့ စမ်းသပ်တဲ့ပုံ…။ မဆိုးဘူးနော်…။ ဆော့ကြည့်ပါလား...။ ။
Posted by lay-ma at 1:14 AM7comments Links to this post
ငါကိုယ်တိုင် လမ်းပျောက်နေခဲ့တယ် … ။
ဘယ်အချိန် ငါဆုခြွေရမှာလဲ … ။
ငါ ….. ကြွေပေးပါ့မယ် …။
ငါတတ်နိုင်တဲ့ ပေးဆပ်ခြင်း ပါပဲ…
ငါဟာ ကြယ်တစ်ပွင့် မဟုတ်လား…။ ။
Posted by lay-ma at 5:16 AM 16 comments Links to this post
ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လောက်တူသလဲဆိုရင်...
ချစ်မ ဓါတ်ပုံပြ..ဓါတ်ပုံပြ..ဆိုတဲ့ ဂျီမလေး နဲ့ စုန်းမလေး တို့ အတွက် ဓါတ်ပုံတင်လိုက်ပါတယ်…. ( အခြားသူများ မျက်စိမှိတ်ထားပါရန်... လန့်မှာစိုးလို့ပါ )...။ လေးမက ဟိုမင်းသမီးနဲ့ တူတယ်..ဒီမင်းသမီးနဲ့ချွတ်စွတ်ဆိုပြီး အငြင်းပွားကုန်မှာစိုးလို့ ဘယ်သူနဲ့တူလဲ ဆိုတာပါ တစ်ခါတည်း ပြောလိုက်ပါတယ်…။
အမှန်ကို ၀န်ခံရရင် နုစဉ်အခါက ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်…။ အပေါ်ပုံက ၁၁လပိုင်း ၂၀၀၃ ကဖြစ်ပြီး…အောက်ပုံကတော့ ၃လပိုင်း ၂၀၀၇ ဖြစ်ပါတယ်…။
အဟိ …ရှေ့ကကြည့်ရင် Lee-Young-ae(ချန်ဂင်) နဲ့ ၆၁ % တူပြီး… ဘေးကကြည့်ရင် Angelina Jolie နဲ့ ၇၂% တူတယ်ဆိုလို့ အိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး…( ကျန်တဲ့ သူတွေမသိလို့) ။ ။ :P
Posted by lay-ma at 2:02 PM6comments Links to this post
နေမကောင်းပါ ... သို့သော် မဖျားပါ … ။
မနေ့က အလုပ်မသွားခင်ကတည်းက နှာမွန်ုပြီး ဟတ်ချိုး … ဟတ်ချိုး ..ဖြစ်နေတာ ပြန်လည်းရောက်ရော Tissue paper ကို လက်ကချလို့မရဖြစ်သွားတယ်….။ အဆိုးဆုံးက မျက်ရိုးကိုက်တာ….။ ခေါင်းတောင်မထောင်နိုင်ဘူး ( အလကား ညာပြောတာ … Recent comments တွေ … ဆီပုံးက နှုတ်ဆက်သံတွေ အမြန် ခိုးဖတ် လိုက်သေးတယ်… ပြီးမှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီးပြုံးပြီး အိပ်ရာပေါ်တက်တာ…
-ပုံ- ကိုယ်စောင့်နတ်) …
feed တွေ စစ်လိုက်တော့ မိုးချစ်သူလေး ပို့စ်အသစ်တင်ထားတာတွေ့လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ … ဟိုက်…တုပ်ကွေးဆိုပါလား….။ ဒါဆို ငါကွေးပြီလားမသိဘူးဆိုပြီး ဆေးသောက်လိုက်ပါတယ်…။ ဘလော့ဂ်တွေလည်း မမွှေနိုင်တော့ပါဘူး…။ မျက်ရိုးနဲ့ခေါင်းတအားကိုက်လို့ပါ … ( တကယ်က…
ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ ဆက်ထိုင်နေရင် နေမကောင်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရရှိတော့မယ့် အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးသွားမှာစိုးလို့ …… -ပုံ- ကိုယ်စောင့်နတ် ) ..။
ခုတော့ အခြေအနေ ကောင်းလာပါပြီ …။ အနွေးထည်ဝတ်ပြီး အိမ်လည်ထွက်လိုက်ပါဦးမည်…( အဲဒါ အကြွေးတောင်းထွက်တာ…. -ပုံ- ကိုယ်စောင့်နတ် )။ ။
Posted by lay-ma at 8:43 PM4comments Links to this post
My world & me (4)
ဘလော့ဂ်ကို နာမည်ပေးသလို ဒီဘလော့ဂ်မှာ မွှေမယ့် နှောက်မယ့် လက်ပိုင်ရှင်အတွက်လည်း နာမည်ပေးခဲ့ရတယ်…။
နာမည် အစစ်မသုံးဘူးလေ … အပြင်လောကမှာ သိပ်ကျော်ကြားသွားမှာစိုးလို့ ….( ခိုးကြောင် ခိုးဝှက် ရေးနေတာ )…။
ကိုရန်အောင် ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ မေသန်းနု ”
မပန်ဒိုရာ ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ အာလာဒင် ”
ပုဂံသား ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ ရန်ကုန်သူ ”
မဂျစ်တူး ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ တာတေ ”
စေတန်ဂေါဒ့် ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ ဗီးနပ်စ် ”
မနိုင်းနိုင်းစနေ ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ အိပ်အိပ်တနင်္ဂနွေ ”
မမေဓာဝီ ဆိုတော့ ကိုအားကျလို့ …. “ ခေမာဝတီ ”
ညီညီ ( သံလွင် ) ကိုအားကျလို့ ….့ လေးမက “ မမ ( ငမိုးရိပ် ) ”
ကိုမောင်လှ ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ မယ်ရုပ်ဆိုး ”
ဘာညာ ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ အာပလာ ”
မိုးညို ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ နေသာ ”
ပေါက်ပေါက်ဆုပ် ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ ကန်စွန်းရွက် ”
မညလေး ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ မွန်းတည့်လေး”
ကိုမျက်လုံး ကိုအားကျလို့ …. လေးမက “ မိနားရွက် ” ..။
ရွေးလိုက်တဲ့ နာမည်အားလုံးက အရမ်းမိုက်နေတော့ ဘယ်နာမည်ပေးရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်….။
ဒါနဲ့ ဘ၀ဟောင်းက နာမည် “ မလေးငယ် ” ကို ပြန်သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်…။
တိုတိုရှင်းရှင်း မလေး လို့ပဲရေးလိုက်မယ်လို့ စဉ်းစားပြန်တော့ မအိမ့်ကို မလေးလို့ ခေါ်ကြတာ သတိရသွားတယ်…။
ဒါနဲ့ပဲ ဘိုဆန်ဆန် နာမည်လေး “ လေးမ ” လို့ ပေးလိုက် ပ်ါတယ် ….။ ။
မှတ်ချက် ။ ။ ကျော်ကြားသူတို့၏ နာမည်ကို အတုခိုးရန် ကြံစည်ခဲ့သဖြင့် ချိတ်မချိုးကြေး..။ စိတ်ဆိုးတဲ့သူ မုန့်ဝယ်ကျွေး...။
သည်းခံပါရှင်…။ လေးမ ခုတလော နည်းနည်း စိတ်ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်နေလို့ ဒီလိုစာတွေရေးနေမိတာပါရှင် ( အရင်ကလည်း စာကြီးပေကြီးတွေ ရေးဖူးတာကျနေတာပဲ)…။ လမကုန်ခင်တော့ စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက် တိုက်ပါ့မယ်…။ ။
Posted by lay-ma at 6:06 PM 13 comments Links to this post
My world & me (3)
My world & me … (2 )
My world & me … ( 1 )